USA, EU unmoved by Zimbabwe's anti-sanction demo - Bulawayo24 News
26 Oct 2019 at 09:03hrs | Views
The United States of America (USA) and the European Union (EU) are seemingly not going to remove the sanctions that they have put on Zimbabwe anytime soon as eagerly anticipated.
USA and the EU issued out a statement citing that the sanctions they imposed decades ago were not on Zimbabwe but mainly ZANU-PF individuals.
This is not how the President of Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa views it, as today the President declared it a day of anti-sanctions.
Thousands of Zimbabweans thronged the streets of the capital Harare, demanding the sanctions to be removed.
The ANC and some civic organisations joined the march in South Africa with fellow Zimbabweans residing in South Africa, as they picketed at the EU and USA embassies in Pretoria as well as the Beitbridge border post.
Kennedy Mandaza the ZANU-PF spokesperson in South Africa said that "illegal sanctions should be removed they have brought untold suffering not only to Zimbabwe but also the region."
ANC's secretary-general Ace Magashule concurred with Mandaza, "our support is in line with the African Union Resolution to support Zimbabwe in general, and especially against the USA led sanctions, as our fellow comrades in Zimbabwe struggle to rebuild their economy."
However, the EU said that the sanctions do not have any major repercussions to the economic wellbeing of Zimbabwe, "none of the restrictive measures has an impact on trade and the tariff and quota-free privileged access of Zimbabwean goods to the EU market granted by the Economic and Partnership Agreement that was ratified in 2012."
The EU further highlighted that the sanctions can be removed anytime, "the restrictive measures are reviewed annually and changes can be made at any time, when Zimbabwe demonstrates that conditions that led to their imposition have substantially changed."